MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan Shan oo Shacab ah ayaa ku dhaawacmay, kadib markii tiro Hoobiye-yaal ay ku dhaceen saaka maanta oo Axad ah Xaafadaha ku dhow garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa u sheegay Warsidaha Garowe Online in saddex Hoobiye, ay ku dhaceen Xaafadda Danwadaagta, oo ku dhaw Xerada Xalane, oo ah xarunta Taliska Ciidamada AMISOM, oo ku dhinac taalla Garoonka Diyaaradaha.
Dadka ku dhaawacmay madaafiic waxaa ku jira kuwa isku qoys ah, oo caruur iyo haween ay kamid yihiin kuwaasoo loola cararay xaruumaha Caafimaada ee magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab oo dusha u ridatay weerarka, ayaa sheegtay in mid kamid ah Madaafiicda uu ku dhacay Gudaha Xerada Xalane, oo ay ku sugan yihiin saraakiil Ajnabi ah, Safaarado iyo diblumaasiyiinta Beesha Caalamka.
Ma jirto wax war ah oo illaa hadda kasoo baxay saraakiisha amniga dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo ku aadan weerarka hoobiye ee dadka shacabka ku waxyeeleeyay Caasimadda.
Duqeynta madaafiicda ah ayaa kusoo beegmaysa xilli maanta Muqdisho looga dabaaldegayay xuska 58-sano guuradii kasoo wareegatay markii ay midoobeen gobolada Woqooyi iyo kuwa Koonfureed, iyadoo la xiray guud ahaan wadooyinka, lana hakiyay dhaq-dhaqaaqa Gaadiidka rayidka.
Sidee Xasan Sheekh loogu soo dhaweeyay Muqdisho? [Sawirro]
Soomaliya 30.08.2018. 10:08
Wasiirro iyo Xildhibaanno katirsan dowaldda Federaalka ayaa Xasan Sheekh kusoo...
Madaafiic ku dhacday nawaaxiga Madaxtooyadda Soomaaliya
Soomaliya 23.12.2017. 13:24
Farmaajo oo Shirka Iskaashiga Afrika iyo Yurub kaga qayb galaya Abidjan
War Saxaafaded 30.11.2017. 00:32
Madaafiic lagu garacaay xaafaddo ku dhaw Villa Soomaaliya
Soomaliya 30.08.2018. 16:52
Farmaajo oo xilalkii ka qaadey mas'uuliyiin katirsan Maxkamadda sare
Soomaliya 09.08.2018. 19:54
Farmaajo oo booqday xarumo ay Eritrea mashaariic ka fulineyso [Sawirro]
War Saxaafaded 30.07.2018. 01:38
Soomaaliya: 80 Sarkaal oo ka tirsan NISA oo la eryay [Akhri Sababta]
Soomaliya 23.07.2018. 23:06